အိန္ဒိယမှာတော့ခြွင်းချက်အားလပ်ရက်ခရီးသွားအထုပ်များ - ခေါ်ရန် 91-993.702.7574
အိန္ဒိယဘာသာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုတစ်ဦးကြွယ်ဝသောသမိုင်း, အံ့သြဖွယ်သဘာဝအလှအပ, မယုံနိုင်စရာရှေးခေတ်ဗိသုကာအံ့ဘွယ်သောအမှုနှင့်တက်ကြွခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပြည့်စုံတစ်ဦးဗဒေများနှင့်ဆန်းကြယ်မှုများမြေယာဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှဧည့်သည်များကသူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အလှနှင့်သမိုင်းကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်အိန္ဒိယကိုစုပြုံ။ ဘာသာရေးဘုရားဖူးများအတွက်, မတူနိုင်တဲ့သဘာဝကမြင်ကွင်းများကိုတွေ့မြင်ရန်, သို့မဟုတ်ဤအံ့သြဖွယ်နိုင်ငံ၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်းအတွက်မိမိကိုယ်ကိုဗတ္တိဇံမှဖွစျစေ, ဧည့်သည်များနှင့်အပန်းဖြေသူတို့ရဲ့ခရီးစဉ်များအတွက်အများဆုံးခံစား၏အတွေ့အကြုံရှိခရီးသွားအေဂျင်စီနဲ့အလုပ်လုပ်ရသေချာ သဲကျောက်စရစ် Tours မှ.
သဲကျောက်စရစ် Tours မှဒီအံ့သြဖွယ်နိုင်ငံတိုင်းပြည်နယ်နှင့်ဒေသတလျှောက်လုံးခြွင်းချက်အားလပ်ရက်ခရီးသွား packages များနှင့်လူကြိုက်များအိန္ဒိယခရီးစဉ်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အိန္ဒိယအတွက်အများဆုံးဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ဒေသခံခရီးစဉ်အေဂျင်စီများတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါအလွန်အမင်းအတွေ့အကြုံနှင့်ဆုရခရီးသွားအေဂျင်စီအဲဒီဒေသတွေအတွက်အထူးအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူလူတို့အဘို့အခြို့သော features တွေသို့မဟုတ်က်ဘ်ဆိုက်များကိုမီးမောင်းထိုးပြအများအပြားအရာများ၏ပြည်နယ်များရဲ့မတူညီဒေသများ, အပေါငျးတို့သစူးစမ်းလေ့လာကြောင်းခရီးစဉ်၏ကျယ်ပြန့ပေးထားပါတယ်။
Bhitarkanika တောတွင်းအပန်းဖြေစခန်းထဲကနေလှေ Cruise နဲ့ Eco-တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ခရီးစဉ်ငှါ, အလွန်အမင်းအတွေ့အကြုံရှိအေဂျင်စီတိုင်းခရီးသွားများ၏အလိုဆန္ဒများနှင့်အကျိုးစီးပွားနှင့်တွေ့ဆုံရန်ရရှိနိုင်ကာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ခရီးစဉ်အထုပ်ရှိပါတယ်။ ဘယ်နေရာမှာမဆိုတိုင်းပြည်အတွင်းခရီးသွားလာအမှန်တကယ်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံအတွက်အောက်ပါအံ့သြဖွယ် Adventures အထဲမှရွေးချယ်ပါ။ အေဂျင်စီရဲ့အများဆုံး၏အချို့ လူကြိုက်များခရီးစဉ် packages များ ပါဝင်:
Shimla Manali ခရီးစဉ် packages များ
Goa ခရီးစဉ်နှင့်အားလပ်ရက် packages များ
Ooty ခရီးစဉ် packages များ
သာ Odisha ခရီးစဉ်
အမြဲစိမ်း Kerala packages များ
တော်ဝင် Rajasthan ခရီးစဉ် packages များ
အိန္ဒိယတိုက်ငယ်ကိုမကြာခဏအကောင်းဆုံးအုပ်စုများ၏အကျိုးစီးပွားပေါ် မူတည်. ဒေသအားဖြင့်စူးစမ်းနေပါတယ်။ အိန္ဒိယတစ်ခုချင်းစီကိုပြည်နယ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှု, ဓလေ့ထုံးစံ, သမိုင်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှဧည့်သည်များဆွဲယူသဘာဝအလှတရားရှိပါတယ်။ သဲကျောက်စရစ် Tours မှအပါအဝငျဤအံ့သြဖွယ်တိုင်းပြည်များ၏အမျိုးမျိုးသောပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများစူးစမ်းဖို့အိန္ဒိယအတွက်တိကျတဲ့ခရီးသွား packages များကမ်းလှမ်း:
မြောက်အိန္ဒိယ - ရှေးဟောင်းဘုရားကျောင်းမှချစ်စရာကောင်းကျေးရွာများနှင့်ဘာသာရေးက်ဘ်ဆိုက်များကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ရေကန်များ shimmering နှင့်အံ့သြဖွယ်ရေတံခွန်များ
အရှေ့အိန္ဒိယ - လူအတော်များများရှေးဟောင်းအင်ပါယာများအတွက်အာဏာရစင်တာ, အရှေ့အိန္ဒိယအထင်ကရအထင်ကရအဆောက်အ, မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဘုရားကျောင်းနှင့် untainted shorelines ကမ်းလှမ်း
အရှေ့မြောက်အိန္ဒိယ - ထိုဟိမဝန္တာတောင်တန်း၏ခြေရင်းနားမှာတည်ရှိပြီးအနည်းဆုံး Explorer နှင့်အများဆုံးလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဒေသ
အနောက်အိန္ဒိယ - သမိုင်း, ဝိညာဉ်ရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအတွက်ချမ်းသာတဲ့အနောက်အိန္ဒိယတစ်တက်ကြွယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဘာသာရေးစင်တာများနှင့်အတူမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကိုသဘာဝအလှတရားပေါင်းစပ်
တောင်ပိုင်းအိန္ဒိယ - အရှိဆုံးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကိုသဘာဝအလှအပနှင့်ရှေးခေတ်အထိမ်းအမှတအချို့ featuring
ဗဟိုအိန္ဒိယ - လူအတော်များများဘေးမဲ့တော, အမျိုးသားဥယျာဉ်, လူမျိုးစုဒေသများနှင့်ရှေးခေတ်ဘုရားဖူးက်ဘ်ဆိုက်များ၏အိမျ
သဲကျောက်စရစ် Tours မှအိန္ဒိယနိုင်ငံသားအပေါငျးတလျှောက်လုံးခြွင်းချက်နေရာများမှအများဆုံးစစ်မှန်ခြင်းနှင့်ကြိုးအားလပ်ရက်ခရီးသွား packages များနှင့်စိတ်ကြိုက်ခရီးစဉ်ပို့ချထံအပ်နှံသည်။ အဲဒီမှာကျေးလက်သွားရောက်ရန်မပိုကောင်းလမ်းယင်းဒေသ၏သမိုင်းကြောင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုစွဲလန်းနှစ်သက်ဖြစ်လာသည်ကို၎င်း, ခရိုင်အတွင်းအများဆုံးအတွေ့အကြုံရှိ Tour အေဂျင်စီနှင့်အတူထက်ဒီအံ့သြစရာမြေ၏ဂုဏ်အသရေကိုတွေ့ကြုံခံစား။